Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Ny programa karatra fitsangatsanganana visa Elite any Thailand dia mbola mena aorian'ny 16 taona
Ny karatra fitsangatsanganana visa any Elite Thailand dia natolotry ny praiminisitra Thaksin Shinawatra 16 taona lasa izay. Ny Thailand Privilege Card Co. (TPC) dia tsy nahazo tombony velively ary nanangona trosa 240 tapitrisa baht tamin'ity taom-piasana ity.
Raha afaka misoratra anarana mpikambana vaovao 2,600 XNUMX ny orinasa amin'ity taona ity dia afaka mihodina amin'ny mainty izy io.
Ireo manana ny karatra fitsangatsanganana visa Elite dia tsy mandeha ihany noho ny COVID-19.
Ny Manampahefana misahana ny fizahan-tany any Thailand dia miara-miasa amin'ny Thailand Privilege Card hanolotra bonus Elite bebe kokoa amin'ny ho avy.
Nilaza ny TPC fa ho mainty mainty ity orinasa ity amin'ity taona ity raha mpikambana vaovao 2,600 XNUMX no hita ho an'ny karatra fitsangatsanganan'ny visa Elite Thailand. Ny mpikambana Aziatika betsaka indrindra amin'izao fotoana izao dia ny sinoa. Any Eropa, an'ny UK izany fanavahana izany.
Ny ankamaroan'ny tompona dia manemotra ny fitsidihany any Thailand noho ny fitakiana birao sy ny onjam-panafody vaovao, indrindra ny any Bangkok. ny Karatra Tombontsoa Thailandy Nilaza i Co. fa nisy tahan'ny fitomboana 93 isan-jato tamin'ny varotra tao anatin'ny 12 volana lasa. Nisy 2,552 ireo mpikambana vao nisoratra anarana tamin'ny totalin'ny 13,564 tamin'ny ankapobeny.
Ny visa Elite dia manome visa fidirana marobe mandritra ny 5-20 taona ho valin'ny fandoavam-bola voalohany amin'ny 600,000 baht ka hatramin'ny 2 tapitrisa baht, araka ny safidy voafantina amin'ireo safidy folo. Nilaza ny TPC fa misy tsena lehibe 2 amin'izao fotoana izao. Ny vazaha sasany maherin'ny 50 taona dia mahazo ny visa Elite ho solon'ny visa fisotroan-dronono mandritra ny herintaona ary fanitarana fijanonana izay mitaky fiantohana ara-pitsaboana ankapobeny ankoatry ny rakotra manokana COVID.